उपाधि जितेपछि गोल पोस्टकाे जाली किन काट्छन् जेरार्ड पिके ? « Drishti News – Nepalese News Portal
उपाधि जितेपछि गोल पोस्टकाे जाली किन काट्छन् जेरार्ड पिके ?
७ बैशाख २०७८, मंगलबार 8:06 pm
एजेन्सी । यो सिजनको कोपा डेल रेको उपाधि बार्सिलोनाले जित्यो । गत शनिबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले एथलेटिको बिल्वाओलाई ४-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि उचाल्यो ।
फाइनल खेलको दोस्रो हाफमा १२ मिनेटको अवधिमा चार गोल गर्दै सानदार जितका साथ बार्सिलोना च्याम्पियन बन्यो । बार्सिलोनालाई उपाधि दिलाउन कप्तान लियोनेल मेस्सीले दुई, एन्टोइन ग्रिजमन र फ्रान्की डियो योङले समान एक एक गोल गरेका थिए ।
उपाधि जितेपछि बार्सिलोनाले सेलिब्रेशन गर्यो । खेलाडीहरू खुशीसाथ ट्रफिसँग फोटो खिचे । तर स्पेनिस् डिफेन्डर जेरार्ड पिकेले अरुले भन्दा फरक सेलिब्रेशन गरे । उनले एथलेटिको बिल्वाओको जालीलाई काटेर सेलिब्रेशन गरे ।
पिकेले यसरी सेलिब्रेशन गरेको पहिलोपटक भने होइन, उनले पहिलोदेखि नै उपाधि जित्दा विपक्षीको जाली काट्दै आएका छन् । उनले २०१५मा च्याम्पियन्स लिगमा युभेन्टस विरुद्धको फाइनल जितेपछि पनि गोल पोस्टको जाली काटेका थिए ।
उनले विपक्षीको जाली मात्रै काट्दैनन्, काटेको जाली पनि आफूसँगै घर लाने गर्छन् । पिकेले गोल पोस्टको जाली काटेको फोटो भिडियो देखेपछि धेरैको मनमा उसको किन गरे ? भन्ने धेरैलाई लाग्यो ।
उपाधि जितेपछि विपक्षीको गोल पोस्टको जाली काट्नु र घर लैजानुको विषेश कारण रहेको छ । संख्यात्मक आधारमा विश्वको दोस्रो दैनिक पत्रिका एल मुन्डोले पिकेले खेल जितेपछि अन्तिममा किन हार्ने टोलीको जाली काटिदिन्छन् भन्नेबारेमा प्रष्ट पारेको छ ।
पिकेले प्रतिस्पर्धीको जाली रिस वा अन्य कुनै कारणले भने नकाटेको एल मुण्डोको दाबी छ । उनको अति मिल्ने साथीको विवाह स्पेनिस अन्तर्राष्ट्रिय खेलका कारण रोकिएको थियो । तीनै साथीको सम्झनास्वारूप पिकेले उपाधि जितेपछि जाली काट्ने गरेको मुन्डोको दाबी छ ।
फुटबलमा जाली काटेर लाग्ने पिके भने फुटबलमा एक्लै होइनन्, स्पेनका राष्ट्रिय टोलीका अन्य खेलाडीले पनि जितपछि गोल पोस्टको जाली काटेर लाने गरेको पाइन्छ । स्पेनका राष्ट्रिय टोलीका सर्जियो बुसकेट्स र रियलका कप्तान सर्जियो रामोसले पनि उपाधि जितेपछि जाली काटेर लाने गरेको पाइन्छ ।
फुटबलका कारण आफ्ना साथीको विवाह रोकिएपछि उनीहरूले गोल पोस्टको जाली काट्ने गरेको मुण्डोको दाबी छ । तर, साथीको नाम भने मुण्डोले खुलाइएको छैन । उनले आफ्नो खेल जीवनभरी भने एक सय १० गोल गरेको मुण्डोले जनाएको छ ।